सन्दिप काेलकाता विरूद्द टिममा पर्लान त ? - Nepal Cricket
सन्दिप काेलकाता विरूद्द टिममा पर्लान त ?
भारतमा जारी १२ औं संस्करणको इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा शनिबार नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्द टिम दिल्ली क्यपिटल्सले आफ्नो तेस्रो खेल खेल्दैछ ।
दिल्लीस्थित फिरोज कोट्ला स्टेडियममा दिल्लीले कोलकत्ता नाइट राइडर्ससंग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । खेल नेपाली समय अनुसार राती ८:१५ मा सुरु हुनेछ ।
सन्दीप बिनाको दिल्लीले दुई खेलमा एक जित र एक हार व्यहोरेको छ । कोलकत्ता भने दुवै खेलमा अपराजित रहेको छ ।
यस्तोमा कोलकत्ताले अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिने कोशिस गर्नेछ । दिल्ली भने दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ ।
यस्तोमा दिल्लीलाई कोलकत्ताका आन्द्रे रसेलको भयावह रहेको छ । किनकी रसेल कठिन स्थितिमा पनि एक्लैले खेल जिताउन सक्छन् । यस सिजनमा रसेलले बिष्फोटक ब्याटिङ गर्दै आफुलाई प्रमाणित समेत गरिसकेका छन् ।
पहिलो खेलमा रसेलले सनराईजर्स हैदरवादविरुद्ध अविजित रहँदै १९ बलमा ४९ रन तथा दोस्रो खेलमा किङ्स इलाभेन पन्जाबविरुद्ध १७ बलमा ४८ रन बनाउदै कोलकत्तालाई जित दिलाएका थिए ।
तर, रसेलको कमजोरी भनेको स्पिन बलिङमा रहेको छ । पछिल्ला खेल हेर्दा रसेल फास्ट बललाई सजिलै बाउन्ड्रीतर्फ पठाउने गरेका छन् । यो सिजन उनले फास्ट बलमा १० छक्का र ५ चौका प्रहार गरेका छन् । स्पिन बलिङमा मात्र १ छक्का प्रहार गरेका छन् ।
दिल्लीको घरेलु मैदान कोट्लामा स्पिन बलरलाई मद्दत मिल्ने पिच रहेको छ । र, दिल्लीसंग स्पिन बलिङमा थुप्रै बिकल्प रहेको छ । तर, दुर्भाग्यको कुरा दुई खेल सकिदा खेलमा दिल्लीका कुनै पनि स्पिनरले राम्रो खेल पस्कन सकेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा अघिल्ला दुई खेल गुमाएका नेपाली स्पिनर सन्दीपले मौका पाउने सम्भावना रहेको छ । कोलकत्ताविरुद्ध दिल्लीको लागि सन्दीप वैकल्पिक स्पिनर बन्न सक्ने छन् ।
सन्दीपले कोलकत्ताका रसेलविरुद्ध उत्कृष्ट बलिङ गर्न सक्ने छन् । तर, तथ्यांक हेर्दा रसेलविरुद्ध दिल्लीका स्पिनर अमित मिश्राको प्रदर्शन उच्च छ ।
सन्दीपले घरेलु मैदान कोट्लामा आफुलाई प्रमाणित समेत गर्दै आएका छन् । सन्दीपले अघिल्लो सिजन कोट्ला मैदानमा नै ३ खेल खेल्दै ५ विकेट हात पारेका थिए ।
अघिल्ला दुई खेलमा सन्दीप दिल्लीको टिममा नपर्दा क्रिकेट पण्डितहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए । तर, दिल्लीका प्रशिक्षक रिक्की पोन्डीङले सन्दीपलाई समय आएपछी प्रयोग गर्ने बताएका थिए । त्यसैले, सन्दीप रसेलको लागि प्रयोग हुन सक्ने छन् ।